Iddin Uunsiga ama girgiraha oo aad looga isticmaalo goloyaasha dhaqanka ee Sacuudiga… – Hagaag.com
Iddin Uunsiga ama girgiraha oo aad looga isticmaalo goloyaasha dhaqanka ee Sacuudiga…
Posted on 15 Nofeembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Tobaneeyo sano ayaa laga isticmaalayay golayaasha dhaqanka ee lagu kulmo (guryaha matida) dalka Sacuudiga iddinka lagu uunsado ama girgirha fooxa kaasi oo dadka dhex dhiga farxad iyo reyn reyn inta soo xaadirta markii loo uumiyo, iddin uunsiga ayaa aalaaba lagu sameeyaa dhinaca gacanta si hagaagsan oo aad looga taxadiray, waana sanaacad ama mihnad la iska dhaxlay abka ab, waxaa laga sameeyaa dhowr magaalo oo ay ugu muhimsan tahay magaalada Xaa’il ee Sacuudiga.
Ku dhowaad shan qoys oo ku nool Xaa’il ayaa sii wata sameynta sanaacadan qadiimiga ah, taas oo calaamad u ah isticmaalka malaayiin ka mid ah Sacuudiga oo lagu yaqaano deeqsinimo iyo marti galin.
Waxaa laga sameeyaa geed la yiraahdo al tarfaa oo ka baxa saxaraha Xaa’il, marka geedku qalalo ayey ka sameeyaan iddinka uunsiga ama girgirha.
Mid ka mid ah dadka sanaacadan ka shaqeysta oo la yiraahdo Khaled Matruud ayaa sheegay in sanaacada iddin uunsiga laga isticmaalayey gobolkaasi 140 sano ka hor. Matruud ayaa cabiray sida uu ugu faanayo mihnadiisa, wuxuuna ku hanweyn yahay inuu baro jiilalka ka dambeeya.
Waxay ku qaadataa nidaaminta iyo qurxinta hal girgire ama iddin uunsi inta u dhaxaysa laba ilaa shan saacadood oo shaqo ah oo aad looga taxadiray, qiimaha la siisto ayaa u dhexeeya 50 Riyaalka Sacuudiga (US $ 13.5) iyo laba kun oo riyaalka Sacuudiga ($ 533), waxay ku xiran tahay tayada uu leeyahay.